Otu esi emepụta USB bootable maka ISO na sistemụ ọ bụla | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na m ga-ekwu eziokwu, echere m na kemgbe 2003, anaghịzi m eji CD / DVD ọ bụla. Ruo oge ahụ, oge ọ bụla m chọrọ ịwụnye ihe omume dị arọ ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ niile, emere m ya site n'ịkụ ya na DVD, mana ọ naghị ewe m oge ịchọpụta na enwere ụzọ ndị ga - enyere anyị aka imezu dum usoro na-enweghị wepụ software na kọmputa ma ọ bụ Ndekọ ya na eriri USB. Ọ bụrụ na, dị ka m, ịchọghị iji DVD iji wụnye sistemụ arụmọrụ, nke kachasị mma mepụta USB Bootable.
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị ga-akọwa otu esi emepụta USB Bootable ka anyị nwee ike wụnye Windows, Mac na Linux site na pendrive. Usoro ndị akọwapụtara na post a bụ ndị m na-ejikarị ma m na-eji ha n'ihi na ha dị m mfe. Amaara m na enwere ike ịmepụta ha site na iji sọftụwia ndị ọzọ (dị ka Ultra ISO), mana ihe m na-achọ ịkọwa dị m ka aka onye ọrụ ọ bụla ga-eru, n'agbanyeghị agbanyeghị ahụmahụ na ha enweghị.
1 Otu esi emepụta Windows bootable Windows
2 Olee otú Mepụta Mac OS X Bootable USB
3 Esi Mepụta Linux Bootable USB
3.1 Na UNetbootin (Live CD)
3.2 Na Lili USB Onye Okike (Ọnọdụ Na-adịgide Adịgide)
Otu esi emepụta Windows bootable Windows
Ọ bụ ezie na enwere ike ịme ya n'ụzọ dị iche iche, echere m na ụzọ kachasị mma bụ iji ngwa ọrụ Wintoflash. Iji zere ọgba aghara, aga m akọwa usoro ị ga - agbaso iji mepụta Windows Bootable USB:
Ka anyị gaa na WinToFlash peeji nke anyị na-ebudata ya.
Anyị na-emeghe WinToFlash. Oge mbụ anyị ga-eji ya, anyị ga-ahazi ya, nke anyị pịa «Osote».
Anyị na-ahazi WinToFlash dị ka nseta ihuenyo ndị a na-egosi.
Akara anyị akara igbe abụọ wee pịa «Osote».
Anyị na-ahọrọ nhọrọ "Akwụkwọ ikike efu" wee pịa "Ọzọ".
DỊ mKPA: Gbaa mbọ hụ na anyị nwere enyochaghị igbe nke "Mystartsearch" tupu ịpị «Osote». Ọ dị mkpa ịtọpụ igbe ahụ n'ihi na ma ọ bụghị na engine ahụ ga-agbanwe na ihe nchọgharị weebụ anyị. Ọ bụghị ezigbo echiche “ịnabata, ịnara, ịnara” n’agụghị ihe anyị na-anabata, tụmadị ma ọ bụrụ na ihe anyị ga-agụ bụ ahịrịokwu.
Na WinToFlash ahaziworị, anyị ga - ekepụta Bootable USB. Anyị na-amalite site na ịpị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ "V".
Na-esote na ihuenyo, anyị pịa «Next».
Na nke na-esote, anyị kara akara nke abụọ wee pịa «Osote».
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ onyoyo Windows ISO, họrọ pendrive anyị ka ebe draịva ebe aga wee pịa «Osote».
Na windo na-esote, anyị na-anabata site na ịlele igbe ahụ kwuru "Ana m anabata usoro nke nkwekọrịta ikike ahụ”Ma anyị pịa« Gaa n'ihu ».
N’ikpeazụ, anyị na-eche ka usoro ahụ gwụ. Ọ ga-ewe ihe dịka 15-20 nkeji, dabere na kọmputa. Ọ bụrụ na ndị otu anyị enweghị oke enyemaka, nchere ahụ ga-adị ogologo.
Olee otú Mepụta Mac OS X Bootable USB
Dika m kwuworo n'uzo di iche iche na n'oge di iche iche, abum nke "software hypochondriac" na mu (hey, m) odika ezigbo echiche wụnye OS X site na pendrive. Ihe kpatara ya bụ na ọ dakwasịrị m na m wụnye OS X site na Bootable USB ma ọ mebeghị nkebi mgbake, akụkụ ahụ pụrụ iche nke ga-enyere anyị aka weghachite ma rụọ usoro ndị ọzọ site na Mac na-enweghị ike ịmepụta ọhụụ. otu ngwá ọrụ. Ọzọkwa, usoro nke ịmepụta OS X Bootable USB na-adịkarị ogologo, yabụ ana m ewepụta oge m wee mee ya n'ụzọ dị iche (nke m na-amaghị ma m gụọ ka onye ọ bụla ghara ịgwa m na ara na-agba m). Ọ bụrụ, maka ihe kpatara ya, ihe mere m mere gị, echere m na mgbe ị wụnye Mavericks (na 2013, ọ bụrụ na anaghị m ehie ụzọ) na ọ naghị ekepụta mgbake maka gị, ihe ị ga-eme na-eme nyocha Google nke faịlụ nke, mgbe arụnyere, ga-emepụta nkebi dị otú ahụ.
Iji mepụta OS X Bootable USB anyị ga-eme ya site na Mac site na isoro usoro ndị a:
Ihe mbụ bụ imepe Mac App Store ma budata faịlụ nwụnye maka sistemụ arụmọrụ Apple kachasị ọhụrụ (n'oge a na-ede post a ọ bụ OS X 10.11 El Capitan).
Anyị ga-ebudatara ụdị nke DiskMakerX kachasị ọhụrụ site na weebụsaịtị ha.
Anyị na-ejikọ pendrive anyị na Mac. Ọ ga-abụrịrị opekata mpe 8GB ma dezie ya ka "OS X Plus yana ndekọ."
Anyị na-emeghe DiskMakerX.
Anyị pịa El Capitan (10.11).
Anyị pịa "Jiri oyiri a", ọ bụrụhaala na anyị nwere faịlụ echichi OS X na folda ngwa anyị.
Anyị pịa «Otu 8 GB USB isi mkpịsị aka mbanye».
Anyị na-ahọrọ pendrive anyị wee pịa «Họrọ diski a».
Anyị pịa "ichicha wee mepụta diski ahụ"
Anyị pịa «Gaa n'ihu».
Mgbe ọ jụrụ anyị maka paswọọdụ, anyị tinye ya.
Mgbe usoro ahụ gwụchara, anyị pịa “Kwụsị”.
Ọ bụ ezie na na post a anyị na-ekwu maka otu esi emepụta USB boot, ọ dị ka ọ dị mkpa ịkọwa nke ahụ iji bido site na draịvụ dị iche karịa draịvụ ike anyị na Mac, anyị kwesịrị gbanye kọmputa ahụ ka ịpị igodo Alt n’agagh i hapu ya rue mgbe anyi ga - ahu na diski nile anyi nwere di. Anyị ga-eme otu ihe ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ịbanye mgbake nke m na-ekwu maka ya na mbido usoro a.
Esi Mepụta Linux Bootable USB
para mepụta Linux Bootable USB Aga m akwado nhọrọ abụọ dị iche iche. Nke mbụ bụ imepụta Live USB na Aetbootin, ngwa dị maka Windows, Mac na Linux. Nke abụọ bụ iji ngwa dịka Lili USB Creator nke ga-enye anyị ohere ịrụnye nrụgide na-adịgide adịgide. Kedu ihe dị iche na Live USB na ọnọdụ na-adịgide adịgide? Ọ dị mma, Live USB agaghị echekwa mgbanwe ndị anyị mere ozugbo anyị gbanyụrụ kọmputa ahụ, ebe onye ahụ na-anọgidesi ike ga-emepụta folda nkeonwe (folda ahụ) / n'ụlọ) nke ihe ruru 4GB, kachasị ikike nke FAT32 faịlụ kwadoro.
Na UNetbootin (Live CD)
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmepụta Live USB na UNetbootin, anyị ga-ebu ụzọ wụnye ngwa ahụ. Anyị ga-eme nke a site na ịmepe ọnụ na ịpịnye iwu na-esonụ (na nkesa ndị dabeere na Debian, dị ka Ubuntu):
sudo apt wụnye unetbootin
Ihe na-esote bụ ịkwadebe USB pendrive ebe anyị ga-ekepụta ngwa mgbakwunye. Nwere ike usoro pendrive (na GParted, dịka ọmụmaatụ) ma ọ bụ tinye pendrive si na njikwa faili ahụ, gosi faịlụ ndị zoro ezo (na ụfọdụ distros anyị nwere ike ime ya na ụzọ mkpirisi keyboard Ctrl + H) ma na-agagharị ọdịnaya niile na desktọọpụ, nke a ogologo oge ka anyị nọ na sistemụ arụmọrụ Unix na kama ihichapụ faịlụ ndị ahụ na-etinye ha na folda ahụ .okporo from otu pendrive.
Mgbe ahụ, anyị ga-emeghe UNetbootin ma tinye paswọọdụ nke onye ọrụ anyị, ihe anyị nwere ike ime site na ịpị na njedebe "sudo unetbootin" ma ọ bụ chọọ ya na menu ngwa nke nkesa anyị na-eji.
Iji UNetbootin eme ihe doro anya, ọ bụ ya mere m ji ekwu banyere nhọrọ a tupu. Anyị ga-eme naanị ihe ndị a:
Nke mbụ, anyị ga-ahọrọ onyogho isi. Anyị nwere ike ịhọrọ nhọrọ na-ekwu «Distribution »na ọ ga-ebudata ISO na akpaghị aka, mana enweghị m mmasị na nhọrọ a n'ihi na, dịka ọmụmaatụ, a malitere Ubuntu 16.04 na Eprel 21 na mbipute kachasị emelitere nke UNetbootin nyere n'oge edere usoro ndị a. Ọ bụ Ubuntu 14.04 , mbipute LTS gara aga. Achọrọ m iji nhọrọ ọzọ: DiscoImagen.
Anyị pịa isi ihe atọ wee chọọ onyoyo ISO nke anyị ga ebudatara na mbụ.
Anyị pịa OK.
Anyị na-eche. Usoro ga-ewe nkeji ole na ole.
Na Lili USB Onye Okike (Ọnọdụ Na-adịgide Adịgide)
Ọ bụrụ na ịmepụta Linux Live USB na-eji UNetbootin kwụ ọtọ, na -emepụta USB na-adịgide (ị nwekwara ike iji ọnọdụ Live) Lili USB Onye Okike o sighị ike karị. Naanị ihe ọjọọ bụ na ngwa a dị naanị maka Windows, mana ọ bara uru. Nzọụkwụ ị ga - agbaso bụ:
Anyị na-ebudata ma wụnye LiLi USB Onye Okike (Download).
Anyị na-ewebata pendrive ebe anyị chọrọ ịmepụta faịlụ nrụnye / ọnọdụ na-adịgide adịgide na ọdụ ụgbọ USB.
Ugbu a, anyị ga-agbaso usoro egosipụtara na interface:
Nzọụkwụ mbụ bụ ịhọrọ eriri USB anyị.
Ọzọ anyị ga-ahọrọ faịlụ nke anyị chọrọ ịme USB Bootable. Anyị nwere ike ịhọrọ ISO ebudatara, CD nwụnye ma ọ bụ budata onyonyo ahụ iji wụnye ya ma emechaa. Ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ nke atọ, anyị nwere ike ibudata ISO site na ndepụta dị ukwuu nke sistemụ arụmọrụ. Dịka m kwuru na usoro UNetbootin, m na-ahọrọ mgbe niile ibudata ISO n'onwe m, nke na-eme ka m jide n'aka na m ga-ebudata ụdị nke kachasị ọhụrụ.
Nzọụkwụ ọzọ anyị ga - akwaga ihe mmịfe ahụ gaa n'aka nri ruo mgbe anyị ga - ahụ ederede «(Ọnọdụ na - adịgide)». The size ga-adabere na anyị pendrive, ma m nwere ike ikwu iji kacha kwere. Ọ gaghị ekwe ka anyị karịa 4GB n'ihi na nke ahụ bụ nha kachasị kwa faịlụ nke usoro FAT32 na-akwado.
Na nzọụkwụ ọzọ m na-enyochakarị igbe atọ ahụ. Otu nke dị n'etiti, nke enweghị ndabara, bụ maka ịkpụzi draịva tupu ịmepụta USB Bootable.
N'ikpeazụ, anyị metụrụ osisi ahụ aka ma chere.
Usoro a adịghị ọsọ dịka UNetbootin, mana ọ ga - enyere anyị aka iwere pendrive anyị wee jiri sistemu GNU / Linux ebe ọ bụla anyị gara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Otu esi emepụta USB boot
SJCAM M20 egwuregwu igwefoto nyochaa, arụmọrụ dị mma na nnukwu ego
Ndị a bụ ndị isi 10 ọhụrụ nke iOS 10